Kiinya oo Soomaaliya ka dalbatay in ay ka tanaasusho sheegashada badda ay ku haysato – Kalfadhi
Sida ay qortay warbaahinta Kiinya qaar, waxay Dowladda Kiinya ku xirtay 3 shuruud, oo ad-adag, inuu dib u soo laabto xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kiinya. 3-da shuruudoodba waxay xiriir la leeyiiin badda ay kula muransan tahay Soomaaliya.
Warbaahinta VOA-da oo soo xiganeysa Warbaahinta Kiinya, oo iyaduna soo xiganeysa Xoghaya Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kiinya, Macharia Kamau, ayaa sheegtay in shuruudaha hoose ku tixan, oo ay Soomaaliya fuliso, ay ku xirnaan doonto iney Kiinya dib uga noqoto go’aankii ay gaartay. shuruudaha la sheegayo in ay Kiinya dalbaneyso ayaa kala ah:
1. In ay Soomaaliya ka saarto qariiraddeeda Xirmooyinkii Shidaalka ee ay ku soo bandhigtay dalka Ingiriiska
2. In Shirkadahii Xirmooyinkaas Shidaal soo bandhigay ay ku wargeliso ineysan Soomaaliya qariiraddaas lahayn iyo
3. Iney Soomaaliya ogolaato in wada-xaajood ay iyada iyo Kiinya ku dhameystaan Muranka Badda ay isku haystaan
Sheekada Standard Media ay qortay shuruudaha ay Kiinya soo rogtay
Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) waxay shalay warqaddii ay Wasaaraddda Arrimaha Dibadda ka soo saartay go’aanka Kiinya ay ku sheegtay in meesha ay Kiinya ku tilmaameyso qariirad been ah oo ay Soomaaliya sheegatay, oo ah qeybta ay Soomaaliya ku haysato, ay arrinteedu hortaalo Maxkamadda Cadaaladda Aduunka (ICJ).
Waxayse Soomaaliya intaas raacisay in ay bartaasi waligeedba soo ahayd bar ay Soomaaliya leedahay, ayna Dowladda Soomaaliya difaacan doonto madax-banaanideeda dhuleed, tan siyaasadeed, sharafkeeda iyo midnimadeeda, taasina ay tahay waajib saaran.
Ciwaanka ay VOA siisay shuruudaha ay baahisay in Kiinya ku xirtay xiriirkeeda Soomaaliya
DFS waxay xustay in shacabka Soomaaliya iyo Kiinya uu ka dhexeeyo xiriir soojireen ah, oo dhaqan, dhalyo iyo deegaanba leh, taasoo ay sheegtay in dhib kasta iyo waxyeelo kasta oo soo kororta aysan meesha ka saari karin. Waxay, saasdaraadeed, sheegtay in ay la sii shaqeyn doonto walaalaha Kiinya, Dowladda Kiinya-na ay sidaas oo kale ku boorineyso.